laacib » David Luiz Oo Hadiyado Ku Kacaya 1.1 Milyan Ginni U Qeybiyay Asxaabtiisa Chelsea Si Ay Ugu Dabaaldegaan Hanashada Premier League
David Luiz Oo Hadiyado Ku Kacaya 1.1 Milyan Ginni U Qeybiyay Asxaabtiisa Chelsea Si Ay Ugu Dabaaldegaan Hanashada Premier League
David Luiz ayaa si la yaqaano ugu dabaaldegay hanashada horyaalka ee Chelsea isagoo in ka badan hal milyan ginni ku qarashgareeyo inuu asxaabtiisa laacibkii u qeybiyo jijimo qaali ah oo loo adeegsan karo in fure looga dhigto gawaarida casriga ah.
Kooxda Blues ayaa hogaanka u qabatay Premier League bishii December ka dib markii ay badiyeen 13 kulan oo isku xigta, wixii markaas ka danbeeyayna gadaal ma aysan soo eegin.
Chelsea ayaa xaqiijisatay hanashada horyaalka Premier League isbuuc ka hor markii ay guul ka gaareen laacibkii West Brom.
Laakiin Luiz ayaa awoodi waayay inuu sugo dabaaldega horyaalka ee Axada si uu hadiyadiisa ugu qeybiyo ciyaartoyda laacibkii.
Laakiin daafaca reer Brazil oo ka mid ah xiddigaha ugu mushaharka badan Stamford Bridge ayaa jeebka si hoose gacanta u geliyay isagoo u soo iibiyay furayaal jijimo ahaan u sameysan oo Senturion la yiraahdo iyadoo midkiiba uu joogo 38 kun ginni.
Milkiilaha Chelsea Roman Abramovich ayaa la siiyay midka ugu muhiimsanaa iyadoo furaha laga sameeyay dhagxaanta hawada sarre ka soo dhacda oo da’diisa ay tahay 4.9 bilyan sannadood.
Jijimahaan qaaliga ah ayaa lagu sameyn karaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin in lagu fure looga dhigto qasnadaha lacagta la gashto, in fure looga dhigto gawaarida casriga ah ama in xitaa lagu furto guryaha sida casriga ah loo dhisay.
Luiz ayaa durbaba isku xiray jijintiisa iyo gaarigiisa casriga ahe ee Mercedes, asxaabtiisa ayaa iyadana la filayaa inay sidaas si la mid ah u isticmaali doonaan.
Mid walba oo hadiyada ka mid ah waxaa lagu xardhay magaca ciyaaryahanka iyo lambarka uu xirto, laakiin xitaa hadiyadahaan la siiyay shaqaalaha laacibkii.